GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Myanmar Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tsonga Turkish Turkmen Tzotzil Ukrainian Umbundu Uzbek Uzbek (Roman) Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
“Ihe m na-eche mgbe niile bụ: Gịnị ka m ga-eme ma . . . ?’ ‘Gịnị ka m ga-eme ma anyị nwee ihe mberede okporo ụzọ?’ ‘Gịnị ka m ga-eme ma ụlọ anyị gbaa ọkụ?’ Ihe na-echukarị m ụra bụ ihe na-ekwesịghị ichu onye isi kpakọrọ ọnụ ụra.”​—Charles.
“M na-echegbukarị onwe m. Ọ na-adị m ka m̀ nọ na janglova. Ma, m nyaa ya elu nyaa ya ala, ebe m nọ ka m nọkwa. N’agbanyeghị otú m si na-echegbu onwe m, e nweghị uru m na-erite.”​—Anna.
“Ọ na-abụ ndị mmadụ hụ na m ka na-aga akwụkwọ, ha agwa m na mụ alaferela. Ma ihe na-agbata m n’obi bụ, ‘Ndị a amaghịdị ụdị ahụhụ m na-ata n’ụlọ akwụkwọ.’”​—Daniel.
“Isi na-adị agba m ghara ghara. M na-echegbukarị onwe m banyere ihe nwere ike ime echi ma ọ bụ ihe m ka ga-eme eme.”​—Laura.
Azịza ya bụ mba. Nke bụ́ eziokwu bụ na Baịbụl kwuru na ọ dị mma mmadụ ichegbu onwe ya banyere otú ọ ga-esi mee ka obi dị́ ndị ọ hụrụ n’anya mma.​—1 Ndị Kọrịnt 7:32-34; 2 Ndị Kọrịnt 11:28.
Nchegbu nwekwara ike ime ka mmadụ zere nsogbu. Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Serena kwuru, sị, “I nwere ike ịna-echegbu onwe gị maka na ị ma na ihe ị na-eme dị njọ nakwa na i kwesịrị ịkwụsị ya ka akọnuche gị kwụsị inye gị nsogbu.”​—Tụlee Jems 5:14.
Jụọ onwe gị ma ì kwesịrị ịna-echegbu onwe gị. “Mmadụ ịna-eche otú ọ ga-esi arụ ọrụ dịịrị ya dị iche na mmadụ ịna-echegbu onwe ya. Mmadụ ichegbu onwe ya dị ka ebe mmadụ na-anya janglova. Ọ nyaa elu, nyaa ala, ọ ka ga-anọkwa ebe ọ nọ.”​—Katherine.
Baịbụl kwuru, sị: “Ònye n’ime unu pụrụ ịgbakwụnye otu kubit n’afọ ndụ ya site n’ichegbu onwe ya?”​—Matiu 6:27.
Echegbula onwe gị maka echi. “Jụọ onwe gị, sị, ‘Olee uru ihe a m na-echegburu onwe m maka ya ga-abara m echi ma ọ bụ n’ọnwa ọzọ ma ọ bụ n’afọ ọzọ ma ọ bụkwanụ n’afọ ise na-abịanụ?’”​—Anthony.
Baịbụl kwuru, sị: “Unu echegbula onwe unu mgbe ọ bụla maka echi, n’ihi na echi ga-enwe nchegbu nke ya. Ihe ọjọọ nke ụbọchị nke ọ bụla ezuworo ya.”​—Matiu 6:34.
Na-ewere ụwa gị otú i si hụ ya. “Ihe ka mma ị ga-eme bụ ịdị njikere maka ụdị nsogbu ọ bụla nwere ike ịbịara gị. Ma, buru n’obi na e nwere nsogbu ndị ị na-agaghị emeli ihe ọ bụla banyere ha.”​—Robert.
Baịbụl kwuru, sị: “Ọ bụghị ndị nwere ụkwụ ọsọ na-emeri n’ọsọ, . . . ọ bụghịkwa ndị nwere amamihe na-enweta ihu ọma; n’ihi na oge ọdachi na ihe a na-atụghị anya ya na-abịakwasị ha niile.”​—Ekliziastis 9:11.
Ghọta ihe gị na ya na-alụ. “M ghọtahaala ụdị nsogbu bịaara m, anaghịzi m enye onwe m nsogbu maka ihe ndị ọzọ ha na ya so. M na-ekpebi ihe ndị ka mkpa, jiri ike m niile mewe ha.”​—Alexis.
Baịbụl kwuru, sị: “Chọpụta ihe ndị ka mkpa.”​—Ndị Filipaị 1:​10.
Kọọrọ onye ọzọ nsogbu gị. “Mgbe m dị ihe dị ka afọ iri na otu, ọ na-abụ m lọta akwụkwọ, mụ ana-echegbu onwe m banyere ihe anyị ga-eme echi ya. Mama m na papa m na-ege m ntị ma m kọwara ha otú obi dị m. Obi dị m ụtọ na ha na-enyere m aka. M tụkwasịrị ha obi, na-akọkwara ha otú obi dị m. O nyeere m aka ka ihe ga-eme echi ghara ịna-amapụ m obi.”​—Marilyn.
Baịbụl kwuru, sị: “Ọ bụ nchegbu nke dị n’obi mmadụ ga-anyịgbu ya, ma, ọ bụ okwu ọma na-eme ka ọ ṅụrịa ọṅụ.”​—Ilu 12:25.
Ikpe ekpere. “Ikpe ekpere na-enyere m aka, karịchaa ma m kpepụta ya ekpepụta. Ọ na-enyere m aka ikwupụta ihe na-echegbu m kama iburu ya n’obi. Ọ na-emekwa ka m ghọta na Jehova karịrị ihe ndị ahụ na-echegbu m.”​—Laura.
Baịbụl kwuru, sị: ‘Tụkwasị Chineke nchegbu gị niile, n’ihi na ihe banyere gị na-emetụ ya n’obi.’​—1 Pita 5:7.
Ihe ọ pụtara: Ekpere anaghị eme ka anyị jiri aka anyị dozie nsogbu ndị bịaara anyị. Kama, ọ bụ otú anyị si akọsara Jehova Chineke mkpa anyị. Ọ gwara anyị, sị: “Elegharịla anya n’ụjọ, n’ihi na abụ m Chineke gị. M ga-eme ka ị dị ike. M ga-enyere gị aka.”​—Aịzaya 41:10.
“M chegbuwe onwe m, m na-ekpe ekpere, kọọrọ Jehova otú obi dị m. M na-ehizi ụra nke ọma, n’ihi na m ma na nsogbu m dịzi Jehova n’aka. E nweghị onye ọzọ ga-aka enyere m aka ma e wezụga ya.”​—Carissa.
“M na-adị ajụ onwe m, sị, ‘Gịnị mere m ji echegbu onwe m maka ihe m na-agaghị agbanweli?’ M na-echebara ihe Jizọs kwuru na Matiu 6:27 echiche. Amaokwu a na-enyere m aka ịtụkwasị Jehova obi ma gee ntị na ndụmọdụ ya.”​—Samantha.
Ihe Ị Ga-eme ma I Chegbuwe Onwe Gị
Lee ihe ụfọdụ nwere ike inyere gị aka ma i chegbuwe onwe gị ma ọ bụkwanụ nyere gị aka ibeleta ya.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ka M Ga-eme Ka M Kwụsị Ịna-echegbu Onwe M?
ijwyp isiokwu 40